राष्ट्र बैंकले १५ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने | Ratopati
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार रु १४ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बोलकबोल प्रक्रियाका माध्यमबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकले सबै ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
त्यसमा कूल रु दुई अर्ब २३ करोड ३२ लाख ९१ दिने अवधिको हो । यस्तै रु १२ अर्ब ४७ करोड कूल १८२ दिनका लागि र रु ११ करोड भने कूल ३६४ दिनका लागि बिक्री गर्न लागिएको छ ।
कोरोना बीमा : एक साताभित्र भुक्तानी गर भनेकै दुई साता बित्यो, पैसा आएन !
मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरिँदै, पूरा होलान् बैंकर्सका यी माग ?
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सका नवनिर्वाचित अध्यक्ष दुगड़द्वारा सपथ ग्रहण
सनराइजले लगानीकर्तालाई ८.२८ प्रतिशत लाभांश दिने